Fanavaozana Ny Fifidianana Ao Filipina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Aogositra 2017 5:03 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Jolay 2006 no nivoaka ny lahatsoratra amin'ny teny Anglisy)
Any am-ponja ankehitriny ireo komity ambony misahana ny fifidianana ao Thailandy izay voampanga ho nanodikodina voka-pifidianana, tsy mbola nisy manampahefam-pifidianana Filipina iray voaheloka noho ny hosoka na kolikoly amin'ny fifidianana.
Iray amin'ireo tsy mahomby indrindra eto amin'izao tontolo izao ny rafi-pifidianana ao Filipina. Mety maharitra iray volana mahery no hahafahana mamantatra ny voka-pifidianana aorian'ny androm-pifidianana satria mbola atao tanana ny fanisana ny vato. Mety hanova ny voka-pifidianana koa aza ny famindràna ny vali-pifidianana avy amin'ny kaominina mankany amin'ny renivohi-paritany.
Mety ho lafo be sy mety hiitatra mandritra ny taona maro ny famahàna ireo hetsi-panoherana noho ny fifidianana. Misy ireo tranga izay hanambaràn'ny Vaomiera misahana ny Fifidianana (COMELEC) fa tsy tena mpandresy tamin'ny fifidianana lasa ny ben'ny tanàna, ny mpanolotsaina na mpikambana ao amin'ny Parlemanta am-perinasa, rehefa nisahana tamim-pahadisoana ny asany ireo manampahefana ireo nandritra ny telo taona teo ho eo na vao volana vitsivitsy monja alohan'ny hanaovana ny fifidianana manaraka.
Ny krizy politika ao Filipina amin'izao fotoana izao dia noho ny fiampangana indrindra fa nangalatra tamin'ny fifidianana taona 2004 ny filoha Gloria Macapagal-Arroyo. Navoaka ho hitan'ny vahoaka tamin'ny taona lasa ny fandraketam-peo misy ny resadresaka nifanaovana teo amin'ny manampahefam-pifidianana sy vehivavy iray heverina fa Arroyo tenany, ka niteraka famoriam-bahoaka nitaky ny fialan'ny filoha.
Raha nisy ny fitoriana heloka bevava ho an'ilay manampahefam-pifidianana, mihisatra ny fivoaran-draharaha noho ny fitongilanana hita eo amin'ilay mpampanoa lalàna mitantana ny raharaha ao amin'ny Fitsarana Ambaratonga Voalohany.
Ao anatin'ny fikasana hanavao ny fifidianana ao Filipina, manosika ny fanavaozana ny teknolojia fanisam-bato ny Loholona Richard Gordon. Tiany i Filipina mba handinika amim-pahamatorana ny “fanisana haingana sy mahomby ny vatom-pifidianana ao India”.
Miaro ny COMELEC, ny politikany, ny fandaharan'asany ary koa ireo komitim-pifidianana mihitsy aza ny ComelecAKo. Na dia izany aza, mpanohana mahery fo ny fanavaozana ara-pifidianana ihany koa izy.
Fandraisana andraikitra vaovao ao amin'ny tontolon'ny bilaogy mba hanavao ny rafi-pifidianana ao Filipina ny BotanteKAMI. Ny tanjona nekeny dia izao manaraka izao:
This is dedicated to the idea that is dedicated to the idea that elections belong to the people. Here, we can share information about how to take back control of elections by increasing the pro-activity of our participation in elections, improving voter vigilance, and increasing the accountability of election administrators.
Natokana ho an'ny hevitra milaza fa an'ny vahoaka fifidianana izy ity. Afaka mizara vaovao momba ny fomba hifehezana ny fifidianana amin'ny alalan'ny fampitomboana ny fiarahamiasa mavitrika amin'ny fandraisantsika anjara amin'ny fifidianana, fanatsarana ny fahamalinana amin'ny fifidianana, sy hampitombo ny andraikitr'ireo mpitantana ny fifidianana isika eto.
Manasongadina ny fifangarihana amin'ny rafitry ny lisitry ny antoko i Carl Marc Ramota; izay ny milionera fa tsy ny mahantra no voafidy ho solontenan'ny lisitry ny antoko ao amin'ny Kongresy.
Manome ny toerana ofisialin'ireo komitim-pifidianana momba ny lohahevitra samihafa ny COMELEC Online Press Room (Efitra Gazety Antserasera).